आर्थिक विकासमा ढुवानी क्षेत्र | गृहपृष्ठ
Home लेख | दृष्टिकोण आर्थिक विकासमा ढुवानी क्षेत्र
on: ४ भाद्र २०७५, सोमबार ०६:२८ लेख | दृष्टिकोण
आर्थिक विकासमा ढुवानी क्षेत्र
बहस र विचारमा नेपालमा मेट्रोदेखि पानीजहाजसम्मको कुरा छ । तर, मुग्लिन नारायणघाट सडकको समस्या पहिचान हुन सकेको छैन । सिङ्गापुरबाट १ दिनमा काठमाडौं सामान आइपुग्छ । तर, इलामबाट कुनै चिट्ठी सुर्खेत पठाउनु पर्दा हप्ता दिन लाग्छ । यस्तो ढुवानी सेवामा सुधार नल्याई आर्थिक विकास, उद्यमशीलता, बजार विस्तारको बहस गर्छौं, करोडौं रकम अध्ययनमा खर्च पनि गर्छौं । काठमाडौंबाट पनौती या पाँचखाल कुनै सामान ढुवानी गर्नु पर्दा पर्ने सास्तीलाई पहिचान गर्न सक्दैनौं । ढुवानी त्यस्तो क्षेत्र हो, जसले आर्थिक विकासलाई सहजै जोड्छ । विकसित मुलुकहरूले पनि विकासका निमित्त जोड दिएको क्षेत्र ढुवानी नै हो । नेपालमा पर्यटन वर्षदेखि बजार विस्थापनको बहस गर्दा यहाँको ढुवानी अवस्थाबारे कहिल्यै वास्ता गरिएन । अहिलेसम्म पनि ७७ जिल्लामध्ये ७२ जिल्लामा मात्र सडक सेवा पुगेको छ । वर्षेनि करीब २७ हजार किलोमिटर सडक विस्तार भएको तथ्य अर्थ मन्त्रालयले दिए पनि त्यसको सुधार र दीर्घायुको विषयलाई कहिले महŒव दिइँदैन । काठमाडौंसँग जोडिने बीपी राजमार्गले भार थाम्न नसक्ने, दक्षिणकालीको मार्ग साँघुरो रहने भएकाले नारायणघाट–मुग्लिन सडक एक मात्र विकल्प रहिआएको छ, जुन प्रायजसो अवरुद्ध भइरहन्छ । राजधानीसँग जोडिने एक भरपर्दो सडकमार्ग नरहेको शायद नेपाल नै एक मात्र मुलुक होला ।
सुरुङ मार्ग, फाष्टट्र्याक सपना र गफमै सीमित रहने र यथार्थमा घण्टौं मुग्लिन नारायणघाट सडकमा जाममा बस्नुपर्ने अवस्था नेपालीको रहेको छ । वर्षेनि औसतमा १२ हजार किलोमिटर कालोपत्र हुने भनी जनाइएको नेपालको सडक कति टिक्छन् भन्ने तथ्याङ्क न आर्थिक सर्वेक्षणसँग छ, न भौतिक मन्त्रालयसँग नै । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने ३ हजार ७ सय ९८ किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण भइसकेको छ, यद्यपि ठूला मालगाडीलाई राजधानी प्रवेश गर्न नारायणघाट–मुग्लिन सडकबाहेक अन्य विकल्प छैन । ट्राफिक जाम विश्वव्यापी समस्या हो, तर अन्यत्र विकल्प हुन्छ । दिल्लीमा जामबाट बच्ने विकल्प मेट्रो छ । नेपालमा विकल्प कहिले सोचिएन ! ‘कोटेश्वर जामको हल, एयरपोर्ट मुनिबाट तिनकुने जोड्ने सुरुङमार्ग’ भनी बजेट पस्कियो । त्यो बने पनि जाम फेरि बानेश्वर र गौशालामा सर्ने निश्चित छ । त्यसैले नेपालमा दीर्घकालीन सोचविनाका यस्ता समाधान नै अर्को समस्याको कारक बन्ने गरेको छ ।
पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, काठमाडौं–पोखरा–रेलमार्गको अध्ययन सम्पन्न भयो भनेर सरकारी पक्ष गर्व गर्छ । योजना तयार हुन्छ, अनि बहसमै सीमित हुन्छ तर नतीजा जोगबनी–विराटनगरको १८ किलोमिटर रेलको ट्याक बिछ्याउन ५ वर्ष लाग्छ । नेपालले आफै निर्माण गर्छु भन्नु मूर्खता हो अनि चीन र भारतको सहयोगको अपेक्षा गरिरहनुचाहिँ लाचारी । रेलमार्गको आवश्यकता नेपाललाई हुँदै गएको तथ्यलाई ट्राफिक जाम, महँगो ढुवानी शुल्कले पुष्टि गरिसकेको छ ।
ढुवानी सेवाका एउटा विकल्प उड्डयन क्षेत्रको तर यो खर्चिलो छ । भौगोलिक बनावटले गर्दा नेपालमा हवाई मार्गको आवश्यकता बढी भएको हो भन्दा फरक पर्दैन । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट सामान भिœयाउने व्यवस्था भए तापनि अत्यावश्यक वस्तुमात्र ढुवानी गरिन्छ । अर्को अन्तरराष्ट्रिय विमान स्थल बन्न कति समय लाग्ने हो, अनुमान गर्न सकिन्न । त्रिभुवन विमानस्थलको ट्राफिक कम गर्ने बलियो योजना छैन, सुधारको पनि खास योजना छैन । पर्यटन वर्षको तयारी र प्रचारमा खर्च गरिरहँदा नेपाल भित्रिने प्रमुख मार्ग त्रिभुवन विमानस्थलको गुणस्तर सुधार्ने योजना आवश्यक हुन्छ । धावनमार्गको गुणस्तरले गर्दा अझै पनि कतिपय ठूला जेट नेपाल आउँदैनन् ।
रज्जुमार्ग (रोपवे) प्रयोगको इतिहास लामै छ । नेपालमा दुई ठाउँमा केबलकार सञ्चालनमा रहेको छ– चन्द्रागिरि र मनकामना । हेटौंडा–काठमाडौं रज्जुमार्ग मर्मत गरेर भए सञ्चालनमा ल्याउनुपथ्र्यो । तर, त्यसलाई बेवास्ता गर्नु गलत नै हो । अहिले पनि भाग्नावशेष भेटिने उक्त केबलकारलाई सञ्चालनमा ल्याउन सकेको भए ढुवानी निकै सहज र सस्तो पनि हुन्थ्यो । पर्यटकीय दृष्टिकोणले मात्र प्रयोग हुने केबलकारलाई ढुवानी र यात्राको दीर्घकालीन साधन मान्न सकिँदैन । पाइपबाट इन्धन ढुवानी गर्ने प्रयास शुरू भएको छ । अमलेखगञ्जमा बिछ्याएको पाइपलाइनको भविष्य नियाल्न बाँकी नै छ । बेलाबखत चर्चा हुने जलमार्गको सम्भावना र सार्थकता अहिले भन्न सकिने अवस्थामा छैन ।
जुम्लाको स्याउ त्यहीँ कुहिन्छ र कश्मिरी स्याउ काठमाडौंमा बिक्छ । नेपालको ओखरले बजार पाउँदैन तर विदेशबाट ल्याएको ओखर बजारभरि छ्याप्छ्याप्ती छ । चामल ढुवानीका लागि सरकारले अनुदान दिनुपरेको छ । यो सबै हुुनुको कारण ढुवानी सेवा राम्रो नहुनु हो । सडक र रेलमार्ग नहुनु नै हो । त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन रेलमार्ग आवश्यक छ । नेपालभित्रको ढुवानी सेवा कसरी गुणस्तरीय बनाउने भन्ने महत्त्वपूर्ण विषय हो । फ्लिप्कार्टले तामिलनाडुदेखि मनालीसम्म सामान पुर्‍याउन सक्छ । तर, हामीलाई काठमाडौंबाट जिरीमा सामान पठाउन हम्मेहम्मे पर्ने अवस्था छ । ब्रिटिशले भारतमा शासन गर्दा ढुवानी र यातायात क्षेत्रलाई विस्तार गरेकाले अहिलेको पुस्तालाई सहज भइरहेको छ । ट्रिपरले जथाभावी गरे भन्दैमा ट्रिपर नै बन्द गर्ने हो भने नेपालको ढुवानी सेवामा ठूलो समस्या आउँछ । ट्रिपरमा लगाइएको नियमले निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेर जनतालाई नै भार परेको छ । यो एउटा उदाहरणमात्रै हो । त्यस्तै टाँगाले सडक फोहोर पार्‍यो भनेर वीरगञ्जमा टाँगा बन्द गरिएन, बरु वैकल्पिक बाटो र अनुशासन सिकाइयो । आर्थिक सुधार तबमात्र सम्भव हुन्छ, जब कुनै राष्ट्रले आफ्नै उत्पादनमा वृद्धि गर्छ । आर्थिक उत्पादन वृद्धि गर्न बजारमा सम्भावना हुनुपर्छ । बजारमा सम्भावना तब मात्र देखिन्छ, जब बजारमा पहुँच हुन्छ । बजारमा पहुँच पुर्‍याउने भनेकै ढुवानीले हो ! यसकारण ढुवानी क्षेत्रलाई प्राथमकिताको साथ हेर्ने दायित्व सरकारको हो ।
रेग्मी एक ब्लगर हुन् र हाल क्याथ्फोर्ड कलेज बालकुमारीमा अध्यापन गराउँछन् ।